बेलबारीमा युवकको हत्या आशंकामा १० बढी पक्राउ – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाजबेलबारीमा युवकको हत्या आशंकामा १० बढी पक्राउ
बेलबारीमा युवकको हत्या आशंकामा १० बढी पक्राउ
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार ०७:४३ प्रकाशित
बेलबारी / मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडानं. ७ दौलथपुरमा एक युवा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।कानेपोखरी गाउँपालिका वडानं. १ होक्लाबारी बस्ने १८ वर्षीय आयुष गिरी मृत अवस्थामा नहरको डिलमा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । हिजो साँझ साथीहरूसँग सामान्य विवाद पछि हातपात भएको स्थानीयले देखेका थिए ।
आज बिहान मर्निङवाकमा निस्किनेले नहरको डिलमा मृत अवस्थामा युवाको शव देखेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीलाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए । शवको पोस्टमार्टमका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाई सकिएको छ ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न हिजो मृतक युवासँगै रहेका १० जना बढीलाई अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले जानकारी दिएका छन् । अनुसन्धान जारी रहेकोले पक्राउ गरिएकाहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।